चीनमा बासस्थान छोडेर हिँडेका हात्ती
१७ असार, शुक्रबार
, Jul 01, Friday
प्रविधि जीवनशैली पर्यटन शिक्षा युगवानी बिशेष समाचार नेपाल अन्तराष्ट्रिय अपराध घुमफिर
प्रधानमन्त्री काठमाडौं संक्रमण कोरोना दुर्घटना किसान
अन्तराष्ट्रिय / घुमफिर
२०७८ जेठ २५ मंगलबार
पछिल्लो समय चीनमा बासस्थान छोडेर हिँडेका हात्तीको चर्चा संसारभरि भइरहेको छ। १५ वटा हात्ती आफ्नो बासस्थान छोडेर अहिलेसम्म ५ सय किलोमिटर हिँडिसकेका छन्।
उनीहरू कहाँ जान हिँडेका हुन् भन्ने पत्तो छैन। पछिल्लो समय भने हिँड्दाहिँड्दै थाकेका हात्ती सुस्ताएको भिडिओ र तस्बिरले चीनभित्र र बाहिर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ध्यान तानेको छ।
हात्तीहरू गन्तव्यविहीन यात्रामा निस्किएपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले उनीहरूको निगरानी गर्न अहिले ४ सय जना मानिसलाई खटाएका छन्। थुप्रै ड्रोनहरूले उनीहरूलाई पछ्याइरहेका छन्। मानिस, ड्रोन र ट्रकहरूले उनीहरूले हात्तीलाई २४ घन्टा निगरानी गरिरहेका छन्।
सोमबार चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सिसिटिभीले ड्रोनबाट खिचेको एउटा भिडिओ सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त भिडिओमा कुनमिङनजिकैको जंगलमा हात्तीहरू एक-अर्काको मतलबै नगरी टाँस्सिएर सुतेका देखिन्छन्।
हात्तीहरू त्यसरी सुतेका तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्।
युनानको सिसुवाङबन्ना स्वशासित क्षेत्रस्थित जंगल छाडेर निस्किएका ती हात्तीलाई सहरमा पस्न नदिन अधिकारीहरूले विभिन्न उपाय लगाएका छन्। हात्ती हिँड्न लागेको बाटोलाई बन्द गरेर मानिसलाई रोकिएको छ, बस्ती पस्न नदिन ठूला गाडी, पर्खालले छेकिएको छ।
फोरेस्ट्री र ग्रासल्यान्डको प्रान्तीय ब्युरोले मंगलबार कुनमिङबाट २० किलोमिटर पर रहेको युक्सी शहरमा हात्तीको बथान पुगेको बताएको छ।
ब्युरोले कुनमिन सरकारलाई पनि खतराको संकेत समयमै दिन र सावधानी अपनाउन भन्दै अनुरोध गरेको छ।
गत वर्ष जंगल छाड्दा १६ वटा हात्ती थिए। तर एउटा हात्ती बासस्थानतर्फ फर्किएको थियो।
त्यसपछि बीच बाटोमै दुई वटा हात्ती जन्मिएको नेशनल फोरेस्ट्री एन्ड ग्रासल्यान्ड एड्मिनिस्ट्रेसनले बताएको छ।
गत अप्रिलमा १७ वटा हात्ती उत्तरी युआनजियाङ्ग काउन्टी पसेपछि अधिकारीहरू सतर्क भएका थिए। त्यहाँ पुगेपछि फेरि दुइटा हात्ती पहिला आएको जंगलतिर फर्किएका थिए।
हात्तीहरू लामो यात्रामा निस्किएपछि अहिले नौ वटा ड्रोन, ट्रक र ७६ प्रहरी गाडीसहित ३६० बढी मानिस परिचालन भएका छन्। हात्तीलाई खुवाउन १८ टन खाना बनाइएको छ।
सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार अहिलेसम्म हात्तीको यो बथानले मानवीय क्षति गरेको छैन। तर ५६ हेक्टर जमिनमा गरिएको खेतीमा क्षति पुर्‍याएको छ।
एसियाली हात्ती विज्ञ चेन मिङयोङ्गले चीनमा हात्तीहरू यसरी पहिलो पटक लामो दूरीमा हिँडेको बताए।
'एसियाली हात्तीहरू बसाइ सर्नु सामान्य हो तर यो केही सीमित क्षेत्र भित्रमात्रै हुने गर्छ। यसरी यति लामो दूरीको यात्रा गर्नु एकदमै दुर्लभ हो,' चेनले भने,'उनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो भन्ने हामी भन्न सक्दैनौं।'
उनले हात्तीको यो बथानको नाइकेसँग अनुभवको कमीले सबै हात्ती गलत दिशामा लागेको हुनु पर्ने बताए।
अन्ततः बाध्य भएर रुसको इन्धन डिपोमा युक्रेनले गर्यो आक्रमण
भारतका दुई ठूला मल्टिप्लेक्सबीच मर्जरको घोषणा
रुसी सेनाहरुको शव लिन कोही नआएपछि युक्रेन सरकार नै परिवारकहाँ पुर्‍याउन खोज्दैछ
एलन मस्कले गरे रुसी इन्जिनको तारिफ
युक्रेनका स्वास्थ्य संस्थामा ७२ पटक आक्रमण भएको डब्लुएचओको दाबी
आईपीएल : गुजरात टस जितेर बलिङमा
चितवनमा मातृशिशु अस्पताल निर्माण हुने
उच्च रक्तचापका बारेमा जान्नैपर्ने कुरा
सरकारको कामकारबाहीमा गगन थापाले उठाए प्रश्न
वीपीका पदाधिकारी हटाउने सरकारको चाहनामा सर्वोच्चको तगारो
मुलुकभर थप ५ सय ९९ वटा आँखा उपचार केन्द्र खोलिने
दमक गोल्डकप : टाइब्रेकरमा पुलिस विजयी
स्थानीय निर्वाचन सन्दर्भ
युगवानी समाचार, हरदम तपाईंको साथ !! तपाईंको तेस्रो आँखा !!
प्रकाशक: उद्धव बोगटी
सम्पादक: डा. खेमबन्धु कोईराला
दर्ता नं: 000/2077/78
मैतिदेवी- २९, काठमाडौं
2022 Yugbani. Powered by Ultrabyte